कांग्रेसमा सभापति नै सभापति लहर ! अन्तेमा बाजी कसले मर्ला ! - हेल्लो चितवन अन्लाईन्
August 10, 2020 मा प्रकाशित (६ महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : २४ मिनेट
राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो भूमिका सुन्ने भयको कांग्रेसमा सभापति नै सभापति लहर ! गगनको उम्मेदवारी नै कांग्रेस महाधिवेशनको रौनक बन्ने !
साउन, काठमाडौँ । राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो भूमिका कमजोर बन्दै गइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनको सरगर्मी बढ्न थालेको छ ।
कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९)को त्रासका कारण सदस्यको भौतिक उपस्थितिमा पार्टीका औपचारिक कार्यक्रम र भेला नभएपनि सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट नेताहरूले तयारी शुरू गरेका छन् ।स्थिति सामान्य रहेमा कांग्रेसको महाधिवेशन फागुन ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको छ ।
सभापतिमा निर्वाचित भएपनि नभएपनि गगनको उम्मेदवारी नै कांग्रेस महाधिवेशनको रौनक बन्नेछ ।@लोकान्तर